बलिउड स्टारका वास्तविक नाम
नेपाली फिल्म उद्योगमा आफ्नो नाम फेरेका कलाकर्मी थुप्रै छन् । यो मामलामा नेपाली फिल्मकर्मीले बलिउड स्टारलाई पनि टक्कर दिएका छन् । नेपाली मात्र होइन, आफ्नो वास्तविकभन्दा अर्कै नामले परिचित भएका बलिउड स्टार पनि थुप्रै छन् । कसैले फिल्म अभिनयमा प्रवेश गर्नुअघि नै नयाँ नाम लिएका छन् त कतिले भने केही फिल्ममा अभिनय गरेपछि आफूलाई नयाँ […]
Posted in पत्रपत्रीकाबाट,मनोरञ्जन,साहित्य / कला Read More »
सलमानकी प्रेमिका रोमानियाकी लुलिया
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सलमान खानकी रोमानियन गर्लफ्रेन्ड लुलिया वन्तुरले आइतबार सरप्राइज पाइन् । यो सरप्राइज अरू कसैले नदिएर उनकै प्रेमी सलमानले दिएका हुन् । उनको जन्मदिनको अवसर पारेर सलमानले भव्य पार्टीको आयोजना गर्दै यो सरप्राइज दिए । त्यो पार्टीमा सलमानले आफन्त र परिवारका सदस्यलाई मात्र बोलाएको भारतीय मिडियाले दाबी गरेका छन् । केही समयअघि […]
अरबी युवती र नेपाली युवाको बियोगान्त प्रेम कथा !
साउदीका हरेक पत्र-पत्रिकामा नुरको आत्महत्याको खबरले म आश्चर्यमा परेँ । म अफिस भित्रैको एउटा क्याबिनमा कम्युटरमा ब्यस्त रहन्थे । तर आज अचानक पत्रिका परेको नजरले अचम्मै बनायो । हुन त मलाइ पनि कहाँ अरबी पढ्न आउथ्यो र ? राजको मोबाइलमा देखेको फोटो को कारणले चिनेको मात्रै हो । मैले प्रतक्ष्य देखेको भने थिइन ? कालो […]
मुटु दुखाउँने प्रेम कहानी
एउटा जंगलको रुखमा गुड बनाएर एक जोडी चरा बसेका थिए । यो जोडी एक अर्का लाई अति माया गर्थे । चरी असाध्यै राम्री थिई । सँगै बसेर यो जोडि खुब प्रेमालाप गर्थे । एक दिन प्रेमालापकै सिलसिलामा चराले चरीलाई भन्छ : चरा : तिमी असाध्यै राम्री छौं । म बुढो हुन लागेँ, तिमीले कतै मलाई […]
Posted in समाज,साहित्य / कला Read More »
सुदर्शन गौतम प्रमुख भुमिकामा रहेर अभिनय गर्न लागेको चलचित्र “हिम्मतवाला” (एक बहादुर मानिस) को फस्र्टलुक पोष्टर र शुभमुहुर्त गरिएको छ । क्यानडा र अमेरिकामा छायाँकन हुने तयारी भइरहेको चलचित्र हिम्मतवालाको फस्र्टलुक पोष्टरलाई सिएनएन हिरो अनुराधा कोइरालाले सार्वजनिक गरेकी थिइन । क्यानडाको मिसेसागा सिटीको पार्क इन् ¥याडिसन होटेलमा आयोजित “सुपर कमेडी मेगा नाइट” मा अनुराधा कोइराला, […]
वातावरण दिवशका अबसरमा कार्टुन प्रदर्शनी
काठमाडौं २३ जेठ । विश्वमा वातावरणमा परिरहेको प्रभाव र त्यसले पारेको असरका बारेमा एकहप्ते कार्टुन प्रदर्शनी नेपाल आर्ट काउन्सिलमा आइतबारदेखि सुरु भएको छ । वातावरणविद् डा. तीर्थ बहादुर श्रेष्ठले उद्घाटन गरेको सो कार्यकमको आयोजना वन्यजन्तु पीडित उद्धार कोषले गरेको हो । सो कार्यक्रममलाई कार्टुनिष्ट क्लब अफ नेपाल, दि आर्ट क्लब नेपाल, रेड कार्यान्वयन केन्द्रले सहकार्य गरेको […]
गोपीकृष्णले सोनीको फोर. के.डिजिटल प्रोजेक्सन विक्रि वितरण गर्ने
काठमाडौं,२३ जेठ । गोपीकृष्ण मुभिजले सोनी कम्पनीको फोर. के. डिजिटल प्रोजेक्सनको विक्रि वितरणका लागि नेपालको फ्रेन्चाईज राईट पाएको छ । आयोजित एक जमघटका बीच आगामी २० बर्षका लागि फ्रेन्चाईज राईट पाएको बताउँदै गोपीकृष्णले राजधानीका फिल्म हल सञ्चालकहरुलाई फोर. के. प्रोजेक्सनको डेमो समेत देखाएको थियो । त्यसै क्रममा गोपीकृष्णले भित्राएको 515 SRX-R मोडलको एक प्रोजेक्सन सिस्टम […]
‘सुल्तान’को ट्रेलर सार्वजनिक
बलिउड नायक सलमान खानको चलचित्र हेरेर रमाउने दर्शकका लागि खुसीको खबर छ । सलमानले अभिनय गरेको नयाँ चलचित्र ‘सुल्तान’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ३ मिनेट लामो ट्रेलर हेर्दा लाग्छ, यस चलचित्रलाई निर्देशकले सलमानको एक्सन र आँशुको मेल गराउने प्रयाश गरेका छन् । सुरुवातमै सलमानको आगमन विषेश लाग्छ । चलचित्रमा सलमान खान र नायिका अनुष्का […]
म के भँए कामरेड ?
तिम्रो रिस मुनि परे जस्तै मैले अाँखा उभ्याएर हेरे अग्लाे पर्खाल ,केही रेखाहरु र केही टुक्राहरु ! इतिहासले साेध्ने बित्तिकै शर्माएर बाङ्गीनु पर्ने मेराे हालत त्यसकारण ,नसकेर खप्न अागाेमाथि नसकेर बस्न गाेता खाँए खाडी धाँए फनफनी टाउको घुम्छ कामरेड मैले भाँङ खाँए कि बाैलाए !!! छुल्ल रगत हुत्तिदाँ ज्यानबाट गलिन /कत्ति गलिन अागाे पिए /गाेलि […]